पास छ ? भएपनी उपत्यका प्रबेशमा "नोइन्ट्री" - NayaNepal News
Home समाचार पास छ ? भएपनी उपत्यका प्रबेशमा “नोइन्ट्री”
पास छ ? भएपनी उपत्यका प्रबेशमा “नोइन्ट्री”
काठमाडौँ । सवारी पास बनाइहालेँ, अब ढुक्कसँग उपत्यका जान्छु भनेर तपाईंले धारणा बनाउनुभएको छ ? या त अब सवारी पास बनाइएर उपत्यका जान्छु भन्ने सोच छ । याद गर्नुहोस् ! पास बनाउँदैमा अब उपत्यका छिर्न पाउनुहुन्न । नागढुङ्गा, फरपिङ, मुड्खु, जगाती, जरसिङपौवा या अर्काे कुनै नाकाबाटै फर्कनु पर्ने पनि हुनसक्छ । दुःख मात्रै पाउन सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान पुर्याउनुहोला ?
Previous articleसात दिन लगातार झरी पर्ने
Next articleसेना परिचालन गर्ने तयारी
प्रहरीलाई पकेटमारको ४ हजार रुपैयाँ घुस